निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा घरदैलो मै पाएपछि चौंरीदेउरालीबासी खुशी - सबैको समाचार
काभ्रे जिल्लाको चौंरीदेउराली गाउँपालिकाका जनताले घरदैलोमै विभिन्न रोगको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् । गाउँपालिकाको आयोजनामा पालिकाको ३ स्थानमा निःशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेपछि स्थानीयले स्वास्थ्य सेवा पाएका हुन् ।
जनताको स्वास्थ्य प्रति गाउँपालिका गम्भिर छौं
गाउँपालिका अध्यक्ष गौतमले जनताको स्वास्थ्य प्रति आफू र आफ्नो गाउँपालिका सधैं गम्भि रहेको बताएका छन् । संविधानले समेत मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको स्वास्थ्यलाई विस्तारै निःशुल्क गर्ने तर्फ आफूहरु लाग्ने बताए । ‘जनताको स्वास्थ्य प्रति हामी गम्भिर छौं ।
शुरुदेखि नै हामी जिम्मेवार ढंगले अघि बढिरहेका छौं ।’ गौतमले भने, ‘राज्यले संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्नुपर्नेछ । हामी यसको लागि पनि लागिरहेका छौं । हालको लागि जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर यो शिविरको आयोजना गरेका हौं ।’
आगामी दिनहरुमा सबै प्रकारको पूर्वाधार विकार भएपछि निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्यको चरणमा पुग्ने बताउँदै अब त्यो दिन टाढा नभएको जानकारी दिए । यसैबीच गाउँपालिका उपाध्यक्ष ताराकुमारी चौंलागाईंले जनताको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा दिन निरन्तर प्रयत्नमा रहने बताइन् ।
अन्य विकासका पूर्वाधार निर्माणको लागि आफ्नो कार्यकाल वितेका बताउँदै उपाध्यक्ष चौंलागाईंले अबको चरणमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।
निःशुल्क र गाउँमै स्वास्थ्य सेवा पाएपछि स्थानीयमा खुशी
निःशुल्क र गाउँमै स्वास्थ्य सेवा पाएपछि स्थानीय खुशी भएका छन् । विपन्न, दलित र ज्येष्ठ नागरिकहरु गाउँमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाएपछि खुशी भएका हुन् । आर्थिक अवस्था बलियो भएका र शहरमै बसेकाहरुले राम्रो उपचार पाए पनि आफूहरु आर्थिक रुपमा कमजोर र गाउँमै बस्ने भएकोले स्वास्थ्य सेवा लिन नसकेको अवस्थामा गाउँमै सेवा पाएकोले खुशी लागेको वडा नं. ६ का ७६ वर्षिय खड्गराज गिरीले बताए । विगत ३ वर्षदेखि उनी दाँदको समस्याले ग्रसित थिए
। आफ्नै गाउँमा सेवा पाएपछि उनी खुशी भएका छन् । ‘३ वर्ष अघिदेखि यो दाँतले दुःख दियो । शहरमा जान गा¥हो छ । न आर्थिक अवस्था राम्रो छ न शहरसम्म जान सक्ने शारिरीक अवस्था छ ।’ गिरिले भने, ‘धेरै राम्रो लाग्यो । खानेकुरा नि सजिलोले खान पाउने भो । गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई आशिर्वाद र धन्यवाद छ ।’
त्यसो त सोही वडाका ७६ वर्षिय साइला तामाङ विगत ४ वर्षदेखि आँखाको समस्याबाट ग्रसित थिए । विस्तारै आँखाले देख्न छोड्दै थियो । उनको लागि पनि यो शिविर वरदान नै भएको छ । ‘मेरो आँखाको समस्या भएको ४ वर्ष भयो । दिनदिनै विस्तारै देख्न छोडिसकेको छ ।’ आँखा जचाइसकेपछि तामाङले भने, ‘आँखामा मोतुबिन्दु भएछ । अब अप्रेशन पछि अब राम्रोसँग देख्न पाउने भयो ।’
स्थानीयले यस्तो प्रकारको शिविर बर्षको कम्तिमा २ पटक आयोजना गर्न गाउँपालिकालाई अनुरोध समेत गरेका छन् । सो शिविरमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महानदास लामा, जनप्रतिनिधिहरु पुगेका थिए । सो क्रममा विकासका लागि एकताका इन्चार्ज एकराज सापकोटा, कार्यकारी निर्देशक प्रदिप हुमागाई लगायतका सहभागी थिए ।
कहाँ कति जनाले लिए सेवा ?
वडा नं. २ स्थित डिसीडब्लुसि अस्पतालमा भएको शिविरमा जनरल विरामीहरु महिला १ सय ३५ र पुरुष ८९ गरी २ सय २४, स्त्रीरोग सम्बन्धी विरामीहरु ५७ जना, आँखा सम्बन्धी विरामीहरु महिला १ सय ३८ र पुरुष ९४ जना, दाँत सम्बन्धी विरामीहरु महिला ५३ जना र पुरक्ष ६० जना सहित १ सय १३ जना गरी ६ सय २६ जनाले सेवा लिएका छन ।
त्यसैगरी वडा नं. ५ को जागृति माविमा भएको शिविरबाट जनरल तर्फ महिला १ सय ३ र पुरुष ८८ गरी १ सय ९१ जना, स्त्रीरोग सम्बन्धी विरामी ८३ जना, आँखा सम्बन्धी विरामी महिला १ सय २१ र पुरुष ७५ गरी १९६ जना, दाँत सम्बन्धी विरामीहरु महिला ८४ र पुरुष ५४ गरी १ सय ३८ जना गरी ६ सय १८ जनाले सेवा लिएका छन् ।